Accueil > Gazetin'ny nosy > Fitondrana: Miady an-trano satria matahotra ny ho resy
Fitondrana: Miady an-trano satria matahotra ny ho resy
Aiza foana no lalàmpifidianana izay holanian’ny Antenimirampirenena ka nampanantenain’ny filoham-pirenena fa tsy maintsy hatao ny fifidianana amin’ity taona ity?
Rahoviana marina no hatao ny fifidianana izany, ary amin’ny volana inona no hanatanterahana izany ?
Tapitra sahady ny herinandro nilaza ny filohampirenena fa tsy maintsy aroso amin’ity taona ity ny fifidianana. Hatramin’izao nefa dia mbola tsy misy mazava ny lalàna momba izany. Raha ny loharanom-baovao azao avy amin’ny olona manodidina ny lapam-panjakana eny Iavoloha dia mbola mizara roa hatramin’izao ny eritreritra ny olona manodidina ny filoham-pirenena. Misy hoy ity loharanom-baovao ity no mbola manamafy fa tsy maintsy atao aloha ny fanovana ny Lalàmpanorenana vao izay vao miditra amin’ny fifidianana izay ho filoham-pirenena. Ankilany indray nefa tsy manaiky izany satria mafy loatra ny tsindry avy amin’ny vondrona iraisam-pirenena fa tsy maintsy atao ny fifidianana filoham-pirenena amin’ity taona ity. Vokatr’izay dia tsy misy fanapahan-kevitra vitan’ny fanjakana HVM (Hery vaovao ho an’i Madagasikara) sy ny governemanta tarihiny mihitsy hatramin’izao.
Matahotra ny tsy handresy amin’ny fifidianana ny mpitondra fanjakana ankehitriny ka izao tsy afaka manapa-kevitra izao. Midika izany fa ny hanovana ny Lalàmpanorenana sy ny fametrahana lalàmpifidianana izay heverin’ny fitondrana HVM no mampikatso ny raharaham-pirenena amin’izao fotoana izao. Miandry ny fanapahan-kevitra ny fanjakana avokoa ny rehetra ankehitriny mba hahazoana mahafantatra ny tokony hatao amin’ny fifidianana amin’ity taona ity.
Ny loharanom-baovao hatrany koa no milaza fa eo amin’ingahy Hery Rajaonarimampianina izay filoham-pirenena sy ingahy Rivo Rakotovao no tena ipetrahan’ny disadisa ankehitriny. Ao amin’izy roalahy ireo no misy ny olana ka mampikatso ny raharaha izao. Toa lasa mpijery baolina fotsiny sisa ny governemanta satria lasa adin’ny samy mpanorina ny antoko HVM ny raharaha ankehitriny.
Ankilan’izany rehetra izany dia miady mafy koa ny avy amin’ny ankolafy hafa fa tokony hosoloina ny minisitra maromaro ao amin’ny governemanta amin’izao fotoana izao io. Isan’ny mampirisika izany hatrany ny avy eny Iavoloha ka naniraka ny depiote avy amin’ny fivondronan’ny antsoina hoe “G-5” izay tarihin’ingahy depiote Nicolas Randrianasolo avy any Betroka. Ity depiote ity izay akaiky ny filoham-pirenena tanteraka.
Mizarazara ny hevitra ao amin’ny samy mpitondra amin’izao fotoana izao ary mitarika fitarazohana amin’ny firosoana any amin’ny fifidianana izay ho filoham-pirenena ity raharaha ity.
Noho izany dia azo inoana fa hisy ny fahatarana amin’ny fifidianana amin’ity taona ity. Ny fizotran’ny raharaha aza dia azo vinaniana fa ho amin’ny taona 2019 iny. Izany moa dia efa somary natsidik’ingahy Hery Rajaonarimampianina tamin’ny kabary nataony ny 5 janoary 2018 lasa teo fa tsy ampy dimy taona araka ny lalàna ny fe-potoana hiasan’ny filoham-pirenena io fa efa-taona sy tapany monja ihany.
Midika fo fahakanosan’ny fanjakana koa ity tsy fandraisana andraikitra ity ary mampiseho avy hatrany fa matahotra mafy ny fifidianana ireto mpitondra HVM ireto.
Ambatofinandrahana: Potika tanteraka ilay 4X4 notafihin‘ny dahalo
Tamin’ny sabotsy faha 13 janoary 2018 dia notafihin’ny dahalo sivy lahy ny fiarakodian’ny mpandraharaha iray avy any Amboropotsy antsoina hoe Datsila. Basy mahery vaika kalaky sy basim-borona valo no nentin’ireo dahalo ireo. Miala tokony ho 10 km atsinanan’Ambatofinandrahana no nisian’ny fanafihana ny sabotsy hariva io. Teo amin’ny toerana antsoina hoe Bodana no nisy ny fanafihana. Tifitra variraraka no nahazo ity fiara ity. Nisy olona roa naratra mafy ary miady mafy amin’ny ainy amin’izao fotoana izao. Tsaboina ao amin’ny hôpitaly Ambatofinandrahana izy ireo. Lasan’ny dahalo koa ny vola 6 tapitrisa ariary tany amin’ilay tompon’ny fiara antsoina hoe Datsila ity.
Araka ny loharanom-baovao azo avy any Ambatofinandrahana dia ireo mpandraharaha sy ireo olona izay hita fa manam-bola indray amin’izao fotoana izao no lasibatra ny dahalo satria tsy misy intsony ny omby.
Fa tao Ambositra tao amin’ny tànana antsoina hoe Idiana ao Ankatsaka, miala 500 m atsimon’ny tobin-tsolika mivoaka atsimon’ny tanàna renivohitra, dia notafihin’ny dahalo koa ny ombin’ity fianakaviana iray ity. Omby roa izay efa nohidiana tao an-trano ary miara-mipetraka amin’ny tompony no azon’ny dahalo ireto ny alakamisy mifoha zoma faha 12 janoary 2018 lasa teo. Na dia niantso “vonjeo” aza ity tompon’omby ity dia tsy nisy namonjy ka lasa avokoa ny omby ireto. Eo amoron-dàlana manamorona ny RN7 no nisy ity fanafihana ity.
Mbola manjaka moa ny asan-jiolahy aty Amoron’i Mania, ka raha niady mafy tamin’ny nafitsoka ny ranobe izy ireo teo aloha teo dia hararaotin’ny dahalo indray. Tsy misy masoandro mba mihiratra hoy ny fitenenana.